Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online 2.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Practo ဆရာဝန်များကရှာဖွေထားတဲ့ app ကို ထက်ပိုပါတယ်။ ကဆရာဝန်ချိန်း booking ဆေးဝါးများမိန့်, ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူအွန်လိုင်းမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရှိခြင်းရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, Practo သင်ကိုယ်တိုင်၏ပိုကောင်းဂရုစိုက်ရန်သင့်အား enable အွန်လိုင်းဆေးဘက်န်ဆောင်မှု & ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။
ဒါကြောင့်သင် Practo အကူအညီနဲ့ဘယ်လိုလုပျသလဲ
လက်ျာဆရာဝန်, အမြင်ဆရာဝန်၏တုံ့ပြန်ချက် & စာအုပ်ဆရာဝန်ချိန်း🔅Findသို့မဟုတ် ဆရာဝန် app ကို ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်
🔅Find ထိပ်တန်းအထူးကုဆရာဝန် app ကို အသုံးပြု. အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေ, ကလေးအထူးကု, ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူ & ပိုပြီးအဖြစ်ကျော်ကြားတဲ့ခွဲစိတ်ဖို့ရောဂါအထူးကုကနေ
🔅 ပုဂ္ဂလိကချက်တင်မှတဆင့်အွန်လိုင်းဆရာဝန်များက နှင့်အတူတိုင်ပင် & ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များသည်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုမေးဖို့အတွက် app ကိုမခေါ် & အသုံးပြုနိုင်သည်
🔅 အွန်လိုင်းဆေးဝါးများဝယ်ပါ & သင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာမြန်ဆန်ဆေးဝါးများဖြန့်ဝေနှင့်အတူ
🔅 Fortis, Apollo, Manipal, ကိုလံဘီယာအာရှ, Apollo ပုခက်, Cloudnine & ပိုပြီးတူသော ထိပ်တန်းဆေးရုံချည်နှောင် မှအနီးအနားရှိဆေးခန်းကနေဆရာဝန်တွေ ကိုရှာပါ
🔅ကျော်ကြားတဲ့ NABL နှင့်အတူဇယားအပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှာသငျသညျအနီး Thyrocare တူသော အဖြေရှာတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းများ & အဖြေရှာတဲ့စင်တာများ အသိအမှတ်ပြု
🔅အချိန်မရွေး & ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းများကိုရယူသုံးရန်
သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုဆရာဝန်ရှာဖွေခြင်း - လွယ်ကူပါတယ်လုပ်
သင်တို့၏ကောင်းသောကျန်းမာရေးအဘို့အညာဘက်ကိုဆရာဝန်ရှာဖွေခြင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကနေရှေးခယျြဖို့ရပ်ကွက်အတွင်းဆေးခန်း & ထိပ်တန်းဆေးရုံများအနေဖြင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဆရာဝန်တွေ, အထူးကု, ခှဲစိတျဆရာဝနျ၏ကျယ်ပြန်စာရင်းနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုသင် practo ဆရာဝန် app ကို အသုံးပြု. ဆရာဝန်များနှင့်အတူချိန်း get ကိုကူညီပေးပါတယ်။
app ကိုပေါ်အွန်လိုင်းဆရာဝန်တစ်ဦးရွေးချယ်တဲ့အခါဆရာဝန်များနှင့် ပတ်သက်. လူနာထံမှတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူ, သင်ပိုကောင်း-အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များစေနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းဆရာဝန်တိုင်ပင် - အဆင်ပြေစေရန်သင်ကအများဆုံး လိုအပ်သည့်အခါ
ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်သွားကြဖို့သွားလာရန်လည်းနေမကောင်း? ပုဂ္ဂလိကအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? အွန်လိုင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများနှင့်အတူသင်အွန်လိုင်းဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင် & သင်သည်သင်၏နှစျသိမျ့မှာလိုအပ်သည့်ဆေးဝါးအကူအညီရနိုင်။ သငျသညျဆရာဝနျမြားနှငျ့တိုငျပငျဆှေးနှေးဖို့မခေါ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, chat လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါ Practo app ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်ရုံ 60 sec.You အတွက်ဆရာဝန်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရနိုင်မှာလည်းအခမဲ့အွန်လိုင်းဆရာဝန်တိုင်ပင်ရနိုင်တယ်။ ရုံ Practo app ကို download & ဆရာဝန်များကအခမဲ့ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကိုမေးရန်ကို log in ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ချက်တင်ပေါ်မှာဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန် option ကိုနှင့်အတူသငျသညျတော့ဘူးသွားလာရန်မလိုပါ။
အွန်လိုင်းမိန့်ဆေးဝါးများ - အချိန် & အားထုတ်မှုကိုကယ်တင်
တုပ်ကွေးရာသီအတွက်ဆေးဝါးများတက်စတော့ရှယ်ယာလိုပါသလား? ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆေးဝါးများဝယ်ယူရန်သင့်အနီးရှိဆေးဆိုင်မှတစ်ဦးခရီးစဉ်တွင် save လုပ်ပါ။ အဆိုပါ Practo app ကိုနှင့်အတူအိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီးအွန်လိုင်းဆေးဆိုင်ကတဆင့်ဆေးတွေအမိန့်။
သင်သည်သင်၏ဆေးပညာအမိန့်အားခြေရာခံနှင့် Practo app ကိုပေါ်ရှိသင့်ဆေးဝါးများအိမ်မှာပေးပို့အကြောင်းကို updates များကိုရရှိနိုင်သည်။
100% စစ်မှန် & ယုံကြည်စိတ်ချရဆေးဆိုင်များ & ပေးမယ့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းမှဖြစ်ကြောင်း 40,000+ စာရင်းဆေးဝါးများကနေအိန္ဒိယတွင်အွန်လိုင်းဆေးဝါးများဝယ်ပါ။
စာအုပ်အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှု - သင်အလွယ်တကူ အနီးလက်ျာအဖြေရှာတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းများရှာတွေ့
diagnostic စမ်းသပ်မှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ X-ray & CT Scan ဖတ်ကနေဓာတ်မတည့စမ်းသပ်မှု & ပိုပြီးရန်။ Practo သင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ & ဆရာဝန်များကညွှန်ကြားအဖြစ်အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှုစာအုပ်ဆိုင်ကူညီပေးသည်။
ရုံအွန်လိုင်းဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများစာအုပ်ဆိုင် & နမူနာစုဆောင်းခြင်းအိမ်မှာပြုမိရ။ ရောဂါဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းများအစီရင်ခံစာများကိုသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်ပို့နေကြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု packages များဘွတ်ကင်လုပ်ရန် - သတိထားပါ
အားလုံးအသက်အရွယ် groups.The ကျန်းမာရေးကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးတွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့ပြည့်စုံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု packages များနှင့်အတူ updated နေဖို့အိမ်မှာပြု & သင်သည်သင်၏ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေး post ဒစ်ဂျစ်တယ်အစီရင်ခံစာများအရနေကြသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်ဆရာဝန်များကပေး Practo စတိုးဆိုင်များအားလုံးသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ, သင်သွားလေရာရာ၌, သင်သည်ထိုသူတို့လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုသင်ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြု။
support@practo.com မှာကိုလိုင်း drop
စာအုပ်ချိန်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါ, စိတ်ပညာ, physiotherapy, ကင်ဆာ, မီးယပ်, အာရုံကြော, အရေပြား, Gastroenterology, သွားဘက်ဆိုင်ရာ, အရိုး, ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, urology, ကိုယ်အလေးချိန်, မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ, ENT စောင့်ရှောက်မှု & ပိုပြီးအဘို့နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Practo အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး (ayurveda & homeopathy) တွင်အထူးကုစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online အား အခ်က္ျပပါ
catappult စတိုး 32.55k 31.29M
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.practo.com/company/privacy
လက်မှတ် SHA1: 98:8C:79:2A:D0:7C:F8:5C:4A:F6:E4:42:93:0D:F5:95:F3:7D:41:13
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Practo Market DevBuilds
Practo - Book Doctor Appointments & Consult Online APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ